China 358 akwa nche waya ntupu ngere maka ngwa nke ụlọ mkpọrọ, ụlọ fencing maka nchedo ihe onwunwe Manufacturer and Supplier | Oghere
358 High nche waya ntupu ngere maka nga na-etinye ...
Perforated metal nsu panel maka ụkpụrụ ụlọ ngwa ...
BRC welded ntupu ngere maka Architectural ngere
L-ekara welded waya ntupu ngere maka ụkpụrụ ụlọ bu ...
358 Ogwe mkpuchi waya dị elu maka ngwa ụlọ mkpọrọ, na-agba ụlọ maka nchedo ihe onwunwe
358 Ogwe mkpuchi waya dị elu na-ezo aka na nkwụsị nkwụsị waya 358, 358 mgbochi ịrị elu, ogige nchebe ụlọ mkpọrọ. A na-ejikarị ya eme ihe maka ịgba nche ụlọ mkpọrọ, ndị agha na mpaghara ndị ọzọ chọrọ ịgba mkpuchi nchebe dị elu.
PRO.FENCE na-arụpụta ma na-ekesa ọtụtụ eriri waya waya weld maka izute ọtụtụ ngwa. Anyị nwere oru oma otu na elu ígwè nwere ike ezite ngwongwo n'ime 14days mgbe nnata nke iji. Ndị ọrụ QC anyị na-achịkwa akụkụ ọ bụla nke ngere gụnyere ịgbado ọkụ, ịgbado, mkpuchi ma anyị na-enyekwa ọrụ nke ịgbakọ nke ngere iji chekwaa oge na saịtị.
Nke a na ụdị 358 High nche waya ntupu nsu ka si nwayọọ ígwè. Ma ejikari okokụre na-ekpo ọkụ tinye kpaliri kpuchie ya. O yikwara na ngere welded ndị ọzọ na nhazi mana ntupu dị obere na 76.2 × 12.7mm na site na waya 4mm dayameta. Yabụ na ọ siri oke ike ịbanye ma wakpo iji ngwa aka aka. PRO.FENCE na-enye ngere mgbochi ịrị elu 358 nke igwe dị arọ yana nchekwa dị elu na obosara 2500 mm na ịdị elu nke 2000mm ruo 3300mm. Enwere ike idozi ọtụtụ ogwe n'elu ibe ha. N'ihi ya, a ga-enweta ngụkọta elu nke 6300 mm.
358 Ogwe igwe nchebe dị elu dị ka mgbochi ịrị elu & mgbochi ịkpụ site na mgbochi dị mma maka ịgba na
Mkpọrọ, ebe ndị agha, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na azụmaahịa, ụlọ ọrụ ike, ụlọ ọgwụ echedoro wdg.
Ntupu: 76.2 × 12.7mm
Ogwe ogwe: H2000-3000mm × W2400mm
Biputere: 60 × 60 × 1.5mm
Ntọala: ikpo ala, ihe mgbochi
Fittings: SUS304 / na-ekpo ọkụ tinye kpaliri
Emechara: Hot-tinye galvanized / Powder ntekwasa
1) Mere si àgwà carbon waya dịkarịa ala 4mm dayameta na rụchaa ya na-ekpo ọkụ tinye galvanized mkpuchi (zinc ntekwasa ruo 450g / m2). Ndị a na-arụ ọrụ pụrụ iche na mgbochi corrosion na ndụ ogologo ndụ.
2) Oghere ntupu nke 76.2 × 12.7mm site na 4mm dayameta na-ekpo ọkụ kpaliri waya na-eme ka o sie ike igbutu na ịrịgo. Na waya etinyere n’elu, uwe ga-abụ ịgba nche nche n’ụlọ mkpọrọ, ụlọ ọgwụ, isi ndị agha, ọdụ ụgbọ elu wdg.
3) Mfe ịnapụta ma wụnye.
Nkebi NO.: PRO-12 Ebute :bọchị: -21BỌCH 15 15-21 Nbanye ngwaahịa: CHINA
Kwụ :gwọ: EXW / FOB / CIF / DDP Port Mbupu: TIANJIANG, CHINA MOQ: 50SETS
Nke gara aga: 3D Curved welded waya nsu, na-ewu ewu weld ntupu ngere dị ka nchekwa fencing nke obibi na North American
Osote: Ugboro abụọ gburugburu Powder ntekwasa Waya ntupu ngere maka Municipal engineering
Galvanized Steel ngere
Weld ntupu Fencing
Welded Waya ntupu ngere
Perforated metal nsu panel maka ụkpụrụ ụlọ ...
L-ekara welded waya ntupu ngere maka architectur ...
Chain Link ngere N'ihi azụmahịa na obibi ...
Cokwanyere ntekwasa Weld waya ntupu na-apụta maka ulo oru ...
Ugboro abụọ gburugburu ntụ ntụ ntekwasa Waya ntupu ngere maka ...
Kpọtụrụ anyị taa maka ịchọta atụmatụ.
Zaghachi gị ozugbo ị nwere ike
Adreesị:No.31 Anling 2nd ,zọ, Xiamen, China
Ekwentị:+ 86-592-5550626 (Japanese)
Ekwentị:+ 86-592-5552829 (Bekee)
Anyị na-emeghe: Mn-Fr: 8: 30 am-6: 00 pm